Fortnite dia hiverina amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny Nvidia GeForce Now | Vaovao IPhone
Rehefa miresaka momba ny sehatry ny lalao video streaming isika dia miresaka momba ny xCloud sy ny Stadia an'i Microsoft foana, na dia samy tsy misy amin'ny iOS aza izy roa ireo, saingy ho avy tsy ho ela. Volana, Serivisy lalao streaming an'ny Amazon, dia ho tonga amin'ny iOS alohan'ny faran'ny taona toy ny sehatra Nvidia GeForce Now.
Araka ny voalaza tao amin'ny BBC, Fortnite no iray amin'ireo lohateny lehibe fa ho hitantsika eo amin'ny sehatry ny lalao video streaming Nvida, hahafahan'ireo mpampiasa iOS mankafy an'io lohateny io amin'ny fitaovana Apple rehetra. GeForce Now, toa an'i Luna sy ny sisa amin'ny serivisy lalao video streaming dia hiasa amin'ny alàlan'ny Safari.
Nvidia GeForce izao Azo alaina ho an'ny Windows sy macOS, Chrombook, Nvidia Shield ary Android mandritra ny fotoana ela. Noho ny fetran'ny App Store dia tsy namoaka fampiharana natokana ho an'ny iOS izy, noho izany dia hanararaotra ny asa izay nataon'i Amazon ho an'i Luna.
Fortnite dia mety ho anaram-boninahitra lehibe indrindra an'i Nvidia rehefa hipetraka amin'ny iOS izy, satria tsy mbola nisy izany nanomboka ny volana aogositra lasa teo. Hatao amin'ny alàlan'ny GeForce Now handingana ny fandraràn'i Apple ary hamela ny mpampiasa rehetra hankafy ny lalao amin'ny alàlan'ny drafitra ifotony, ny drafitra dia mametra adiny iray isan'andro, saingy satria Fortnite io, dia azo inoana fa nifanaraka ny Epic ka tsy nisy izany lohateny izany famerana ny fotoana.
anefa Tsy mbola nanamafy ofisialy ny famotsorana i Nvida. ny sehatr'asany ho an'ny iOS, antenaina fa hanao izany alohan'ny fialantsasatry ny ririnina hanararaotana ny fisintonana ny varotra Krismasy, iray amin'ireo fotoana manandanja indrindra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa teknolojia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Fortnite dia hiverina amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny tanan'i Nvidia GeForce Now
Nakatona ny Apple Store! Androany dia misokatra ny famandrihan'ny iPhone 12 Pro Max, 12 mini ary HomePod mini
Apple dia hamindra ny ampahany amin'ny iPad amin'ny iPhone 12 noho ny tsy fahampiana